I-Recipe: Isaladi ye-tangerine kunye ne-ginger sauce
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako I ziqhamo Mandarin
Isaladi yezithelo kunye ne-ginger sauce Yintoni enokuba yinto enobungakanani kwaye kulula ukuyilungisa xa kufike kwi dessert? Ewe, isaladi yesithelo. Ngokukodwa xa ukwenza ehlobo okanye ekwindla, xa iziqhamo kunye namajikijolo zininzi. Enyanisweni, kulula ngakumbi ukuhlamba iziqhamo uze uzifake kwi-vase kakuhle, kodwa isaladi yesithelo ikhangeleka kakhulu kwaye inomdla wokuqala. Sekuyisikhathi eside sijwayele ukudala iintlobo ezahlukeneyo zemifuno kunye neminye imikhiqizo xa silungiselela isaladi yemifuno. Ngoko kutheni ungabonakali ngcamango, kwaye ungazami ukuzonwabisa umdlalo omtsha, ukudibanisa ukunambitheka kweebhanki kunye neziqhamo kunye kunye nokuzalisa konke oku kubukhulu nge-sauce efanelekileyo. Ngokuqhelekileyo, njenge-salad sauce yesithelo, sebenzisa i-kefir, i-yogurt okanye i-cream ehlanjulweyo! Namhlanje sibonelela ukulungiselela isaladi yesityalo esitsha. Ngokuqinisekileyo kunokupheka kwaye nakweyiphi na ixesha, kodwa iphunga le-tangerines, iipulo kunye ne-sawuce eshushu, zizithethe ngokwabo ngemilingo yonyaka omtsha! I-taste of salad iyaba mnandi ukusuka kumhla, kodwa ukuba uvakalelwa kukuba awunayo iisesekile ngokwaneleyo, engeza i-1-2 yeepuniji ze-honey kwi-sauce kwaye i-dessert iya kuzuza kuphela kuyo! Zama, vavanya kwaye ngokuqinisekileyo uya kufumana isidlo esineziqhamo!
Mandarins 3 iipcs.
Imihla yokunyanga 150 g
Ijusi le-Orange 200 ml
I-ginger entsha 2 tsp.
I-Mint eyomile 1 tsp.
Inyathelo 1 Ukulungiselela isaladi, thabatha ama-mandarins ama-2-3, iintsuku ezili-10, i-apula enomnandi neyomuncu, ijusi le-orange okanye obomvu ijisi le-orange njengesiko, isinki esitsha kunye ne-pinch yesinki esomileyo.
Inyathelo 2 Ngemihla, susa ilitye uze uyinqumle kwiisangqa, cima i-apula uze uthathe iikhabhi. I-Tangerines kufuneka ihlambuluke kwiifilimu ize ichithe kakuhle.
Inyathelo 3 I-Ginger ecocekileyo kwaye idibanise kakuhle, ukuze i-pulpopoon 1 yepalp ifunyenwe.
Inyathelo 4 Misela ijusi kwi-thumba, engeza i-ginger kunye ne-1 tsp. isinki, upheke imizuzu eyi-10. Emva koko unqande umsila.
Inyathelo 5 Hlanganisa i-apula, i-tangerines, imihla kunye nama-2-3 wezipuni ze-sauce.
Inyathelo 6 Hlanganisa ngobumnandi isaladi uze usebenze ngokukhawuleza.
I-Caramelized tangerines kwi tsholatshi
Indlela yokufundisa umntwana oneminyaka emithathu ukuba agqoke ngaphandle kokuhlambalaza?
UAna Kalashnikova wabuza uProkho Chaliapin ukuba angatyeleli unyana wakhe
Ukunakekelwa kwebele, isifuba esomeleleyo
Zithini izandla zethu ngathi? Esincinci
Isaladi kunye ne-mackerel kunye nombona
Iibisiki kunye nama-blueberries kunye ne-yogurt